Diyaarad helicopter ah oo maanta soo gaartay gegada Old Tarrford…(Taageerayaasha Red Devils oo aaminsan inuu ku jiray Pogba) – Gool FM
Diyaarad helicopter ah oo maanta soo gaartay gegada Old Tarrford…(Taageerayaasha Red Devils oo aaminsan inuu ku jiray Pogba)
(Manchester) 04 Agoosto 2016. Jose Mourinho ayaa shalay ka dhawaajiyay inay hubaal tahay in laacib kale oo dheeri ah uu ku soo darayo kooxda.
Waxaana la hadal hayay in lacagihii ugu badnaa ebid kubbada cagta adduunka goor dhow kula soo wareegi doonaan xiddiga qadka dhexe ee Juventus Paul Pogba.
Haddaba, maanta ayaa waxaa garoonka Old Trafford soo gaaray diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helicopter.
Juan Mata ayaa markii uu imaanayay xerada tababarka Man United 2014-kii ku yimid Helikobtar, halka Zlatan Ibrahimovci sidoo kale Helikobtar lagu keenay Old Trafford bishii la soo dhaafay si uu u dhammeystiro u soo dhaqaaqistiisa Red Devils.
Sidaa darteed, taageerayaasha Man United ayaa xiiso badan muujiyay markii ay arkeen dayuuradaha qumaatiga u kaca oo soo sal dhiganaya Old Trafford iyagoona qaba rajada inuu ku jiro wiilka reer France ee Paul Pogba.
— M98 (@Simplymata8) 4 August 2016
— Manchester United (@ManUtds_News) 4 August 2016
TOOS u daawo: Portugal vs Argentina - LIVE
TOOS u daawo: Nigeria vs Japan - LIVE